मिर्गौला प्रत्यारोपणको पर्खाइमा पल्पसा- फिचर - कान्तिपुर समाचार
काठमाडौँ — ३०५ नम्बर क्याबिन कता हो ?
त्रिवि शिक्षण अस्पतालको नेफ्रो वार्ड रहेको भवनको भुइँ तल्लामा गार्डलाई प्रश्न गर्दा उल्टै उनले प्रतिप्रश्न गरे, 'बिरामीको समस्या ?'
'मिर्गौला', जवाफ पूरा दिन नपाउँदै गार्डले झट्ट भने, 'चम्सुरी हो ?'
श्रावण ७, २०७८ रासस
काठमाडौँ — स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोना भाइरस संक्रमण को तेस्रो लहर आउनसक्ने भएकाले सचेत रहन आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समिरकुमार अधिकारीले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै संक्रमण दर बढ्दो देखिएकाले तेस्रो लहर आउनसक्ने बताएका हुन् ।
तेस्रो लहर आउनसक्ने भएकाले सबै स्वास्थ्य संघसंस्थालाई अक्सिजन, शय्यालगायत पूर्वाधार तयारी अवस्थामा राख्न अनुरोध गरिएको छ । मन्त्रालयबाट तेस्रो लहर आएर भयाभह स्थिति नआओस् भन्नका लागि सबै स्वास्थ्य संस्थालाई तयारी अवस्थामा राख्न अनुरोध गरिएको अधिकारीले बताए । 'सबै अस्पताललाई अक्सिजन भर्न र शय्या तयारी अवस्थामा राख्न निर्देशन दिएका छौं', उनले भने, 'तेस्रो लहरले बालबालिकालाई बढी प्रभाव पार्ने भएकाले बालबालिकाका लागि सघन उपचारकक्ष (आइसीयू) र भेन्टिलेटर तयारी अवस्थामा राख्न भनेका छौं ।'
प्रकाशित : श्रावण ७, २०७८ १५:४९